विसंगति, विचार र प्रयोगशीलताको कोलाज : खरीको घेरो
चालीसको दशकमा युरोपेली जनताले आफ्नो समाजमा अशान्ति, कोलाहल र कानुनको विद्वेश जस्ता समस्या भोगेका थिए। ब्रतोल्त ब्रेख्तले आफैँले प्रतिपादन गरेको एपिक थिएटर सिद्धान्तमा आधारित 'द ककशियन चक सर्कल' नाटक मार्फत् तात्कालीन् समाजको त्यही विसंगती प्रयोगधर्मी धारमार्फत् उजागर गरे। अहिलेको परिवेशमा ती विसंगती ठ्याक्कै मेल खाने भएकाले हुनुपर्छ ब्रेख्तको उहि नाटक 'खरीको घेरो' मा अनुदित भइ गुरुकुलमा मञ्चित छ। नाटकमा कुशासनको कुरा छ, प्रेमको कुरा छ, भावनाको कुरा छ, विचारको कुरा छ, द्वेशको कुरा छ र राजपरिवार भित्रको षड्यन्त्रको कुरा पनि छ।
नाटक पाँचवटा दृश्यमा देखाइएको छ। उतिबेलाको युरोपीय पात्र तथा परिवेशलाई नेपालीकरण सहित प्रस्तुत गरिएको नाटक सुरु हुँदा राजा जयबहादुर मल्ल र रानी आफ्ना शिशु मनोहर सहित एउटा महाउत्सवमा भाग लिइरहेका हुन्छन्। उहिबेला राजाका भाइले आफ्ना दाईबिरुद्ध षड्यन्त्र रच्दै गरेका हुन्छन्। षड्यन्त्रले राजाको ज्यान लिन्छ। भागाभागको बेला शिशु युवराज मनोहरलाई एक्लो देखि दरवारकी नोकर्नी गीताले शिशुलाई केवल जोगाउने उद्देश्यसहित लिइ हिँड्छे। यसअघि गीताले आफ्नो सिपाही प्रेमी युद्धबाट फर्केर आउँदासम्म कुरीबस्ने वाचावन्धन सहित प्रेमीलाई युद्ध मैदानको लागि बिदाइ गरिसकेकी थिइ। नाटकले दर्शकको ढुकढुकीको गति बढाउँदै लैजान्छ। गीताले मनोहरलाई 'हुर्काउन–बढाउन सक्दिनकी' भन्ने मानी बच्चालाई त्याग्ने मनस्थिति त बनाउँछे जसमा ऊ सफल हुँदीन। राजा–रानीमा मात्र नाटक फन्को मारीरहला भनी दर्शकले अनुमान गर्छन्। अब नाटक गीता वरिपरि घुम्छ।
दरवारका सेना गीताले चोरेको बच्चाको खोजीमा लगातार लागिरहन्छन्। गीता भने हिमालमा भएको दाईको घरमा शरण लिन पुग्छे। त्यहाँ गाउँलेले गीताले बोकेको बच्चाबारे गलत अर्थ लाउने डरले मृत्युको मुखमा पुगेको एउटा मानिससँग 'विवाहको लागि विवाह' गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्छ। गीताले विवाह त गर्छे।।।।।रु तत्कालै युद्ध सकिएको खबर आउँदा त्यो मानिसले युद्धमा जानुपर्ने वाध्यता नकार्न आफूू विरामी परेको नक्कल गरेको देखिन्छ। अब गीता झनै परिबन्दमा पर्छे। उसले पतिसँग ओछ्यानमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका भने कहिल्यै निभाउँदिन। बच्चा हुर्कँदै जान्छ। कुनैदिन गीताको पुरानो प्रेमी फर्कन्छ। गीता आफूले विवाह गरेको तर त्यसको छुट्टै कथा रहेको कुरा प्रेमीलाई सम्झाउन खोज्छे। तर प्रेमी भने कुनै पनि हालतमा गीताको कुरा मान्ने मनस्थितिमा हुँदैन। पछि त्यो प्रेमिल मन मोडिन्छ। गीताको कुरा अदालतमा पुग्छ। प्रेमीले सो बच्चा उसको भएको स्विकार्ने वाचा गर्छ। अक्कलबहादुर नामका अद्भूत न्यायधिसले फैसला सुनाउँछन्। 'बच्चा कसको?' भन्ने निर्णय दिन उनलाई खुबै गार्‍हो हुन्छ। अन्तमा उनले एउटा खरीको घेरो बनाई बच्चालाई बीचमा राख्दा जसले तानेर लैजान सक्छ बच्चा उसैको हुने बताउँछन्। बच्चा आफूतिर तान्न रानी सफल भएपनि गीताले दुःख गरी हुर्काएकोले बच्चा गीताकै हुने एकदमै भावनात्मक फैसला गरी ती जँड्याहा न्यायधिसले दर्शकको ताली पाउँछन्।
न्यायधिसको यो फैसला लगत्तै एउटा गीत गाइन्छ : 'बच्चा कसको पाल्नेको, गाडी कसको ड्राइभरको, खेत कसको जोत्नेको....' यस्तो क्रान्तिकारी भावको गीत गाइँदा रिमाल नाटक घर तालीको गडगडाहटले गुञ्जन्छ।
दस मिनटको मध्यान्तर सहित नाटक २ घण्टा पन्ध्र मिनटको छ। कथा लामो भएकाले यसो भएको हो। गैर नेपाली निर्देशकद्वय मिया र म्याक्सले नेपाली परिवेशमा ढालीएको जर्मन नाटक निकै अभूतपूर्व तरिकाले निर्देशन गरेका छन्।
नाटकमा न्यायधिसको भूमिका एकदमै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ। उनले 'मेरो समस्या भनेको धनी मान्छे हुन्, गरिब होइन' भन्छन्। उनी न्यायधिस हुनुपूर्व र भैसकेपछिका उनका मनस्थिति र भावनाले उनी स्वच्छ छवीका भएको देखिन्छ। तर उनले प्रत्येक फैसला सुनाउनुअघि घुस मागेको देख्दा र केही फैसलाहरू सत्यको पक्षमा नगरेको देख्दा भने दर्शक अलमल्ल पर्छन्। उनले गरेका सबै फैसलाहरू कानुनी आधारको नभै भावनात्मक तथा वैचारीक देखिन्छ। विसंगतिमाथि विचारको संयोजन गरी न्यायधिसले फैसला सुनाउँछन्। न्यायधिसको भूमिका निर्वाह गरेका सुनील पोख्रेलको यो अभिनय निकै उत्कृष्ट छ। उनले कतिपय ठाउँमा 'इम्प्रुभाइजेसन' मार्फ्त् खुबै मीठो अभिनय गरेका छन्।
गीताको भूमिका निर्वाह गरेकी पशुपति राई आफ्नो अभिनयमा मजैले खुलेकी छन्। न्यायधिस सामु आफ्ना घाँटीका नशा फुलाउँदै बाझेकी गीतालाई देख्दा लाग्थ्यो उनी यथार्थमै अदालतसामु आफ्नै बच्चा दावी गरिरेहेकी छन्। जीवन्त छ उनको अभिनय।
यसबाहेक राजकुमार पुडासैनी, सरिता गिरी, विपीन कार्की, सजन थापामगर, रवीन्द्रसिंह बानीयाँ, प्रविण खतिवडा, अरुणा कार्की, कमलमणी नेपाल, भोलाराज सापकोटा, रामहरी ढकाल, सरस्वती थारु, प्रमिला कटुवालको अभिनयमा पनि खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन। नाटकमा धेरैजसो कलाकारले दोहोरो वा त्यो भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेका छन्,। यो जटिल काम गर्न वास्तवमै प्रत्येक कलाकारले निकै मिहिनेत गरेका छन्। गुरुकुल आफैँले तयार गरेको भेषभूषा खुबै सुहाँउदो छ। प्रकाश व्यवस्थापन पनि मध्यम खालको छ। नाटकमा दृश्य र संवादको उत्तिकै समायोजन छ। यसले नाटक खुबै साकेंतिक भएको छ।
नाटकमा प्रयोगधर्मी मानिएको पार्श्व सांगीतिक प्रस्तुति पनि निकै प्रशंसायोग्य छ। सांगीतिक समुहले बेलाबेला कोरसको काम गरेका छन् जसले घटनाबारे दर्शकसामु एउटा बुझाई प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूले गाएको गीत निकै भावात्मक सुनिन्छ।
नाटक लामो भएपनि दर्शकलाई कत्तिपनि झर्को लागेको अनुभूति नदिलाउने काम हास्यरसको छ। गहकिला संवादले कुनैबेला धुरुक्कै पार्छ भने कुनैबेला पेट मिचिमिचि हाँस्ने बनाउँछ। 'तपाईँहरू बिहेको शोकमय धुनमा भुल्ने की मृत्युको उल्लासमय क्षणमा रमाउने?' यस्ता संवादहरू निकै अर्थपूर्ण छन्। अंग्रेजी परिवेशको नाटकलाई नेपाली सुगन्ध दिएर अत्यन्तै रोचक बनाएको श्रेय नाटकका अनुवादक भिमलाल अर्यालमा जान्छ।
गुरुकुलमा २०६६ चैतको १४ र १५ गते मञ्चन भैसकेको नाटक चैतकै २४ देखि बैशाख १८ गतेसम्म पुनः मञ्चन गरिनेछ।
(तस्विर स्रोत : गुरुकुल)
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 10:42 PM